विप्रेषणको पासोबाट कसरी बच्ने ? - Karobar National Economic Daily
विप्रेषणको पासोबाट कसरी बच्ने ?
query_builderJanuary 12, 2017 8:45 AM supervisor_accountकमलराज ढुंगेल visibility760
नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । मानिसका रोजीरोटी घरभित्र उपलब्ध छैनन् । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र उपभोगवादमा परिणत भएको छ । पुँजीको अभावका कारण उपलब्ध स्रोत तथा साधनको परिचालन हुन सकिरहेको छैन ।
देशका प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुन सकेको छैन । कतिपय प्राकृतिक स्रोत नाफाखोरका पञ्जामा जकडिएर रहन बाध्य छन् । विशेष गरेर नेपालको जलविद्युत्लाई उदाहरण बनाउन सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत्को विकासका निमित्त बाह्य तथा आन्तरिक दुवै क्षेत्रका नाफाखोर सक्रिय छन् ।
भनिन्छ, यिनीहरूको नाफा जलविद्युत् विकासका निमित्त प्रदान गरिने इजाजतपत्रको किनबेचबाट हुने गर्छ । नेपालका अधिकांश खोलानाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सरकारले इजाजतपत्र बाँड्दै आइरहेको छ । सुनिन्छ, प्रत्येक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको नाममा कुनै न कुनै तबरले सरकारले इजाजत पत्र बाँड्ने कार्य गरिरहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषण
सन् २०१४ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको प्रतिशत २९.२ रहेको थियो । विप्रेषणको यो योगदानले नेपाललाई विश्वको तेस्रो स्थानमा उभ्याएको थियो । उक्त वर्ष पहिलो र दोस्रो स्थानमा क्रमशः ताजकिस्तान (३६.६ प्रतिशत) र किर्जिज गणतन्त्र (३०.३ प्रतिशत) रहेका थिए ।
ताजकिस्तान र किर्जिज गणतन्त्रले सन २०१५ मा क्रमशः अमेरिकी डलर २.६ अर्ब र १.७ अर्ब विप्रेषण भित्र्याएका थिए भने नेपालले करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याउन सफल भएको थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट अन्य क्षेत्रहरू जस्तै निर्यात र पर्यटनबाट भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ ।
नेपालमा देश विकासका निमित्त आवश्यक पुँजीको अभाव छ । प्रस्तुत आँकडाले के देखाउँछ भने नेपालमा विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यसले पुँजीको अभावतालाई केही हदमा प्रतिस्थापन गरेको देखिन्छ ।
सन् २०१५ मा नेपालमा विप्रेषण आउने देशमा कतार (२०२१ अर्ब अमेरिकी डलर) पहिलो स्थानमा छ । दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा क्रमशः साउदी अरेबिया (१ हजार ८ सय ५३ अर्ब अमेरिकी डलर), भारत (१ हजार ५ अर्ब अमेरिकी डलर), यूएई (८ सय ३ अर्ब अमेरिकी डलर), यूएसए (३ सय ३२ अर्ब अमेरिकी डलर) रहेका थिए ।
नेपालको विप्रषणको भविष्य कतार, साउदी अरेबिया, भारत र यूएईमा निर्भर रहेको देखिन्छ । यी मुलुकको आर्थिक विकास नेपलीहरूका लागि वरदान नै साबित भएको छ । नेपालीहरूका जाँगरिला पाखुरीले काम गर्ने मौका पाएका छन् ।
यी पाखुरीले आर्जेको रकम नेपाल भित्रिएको छ । तर, विगत दुई दशकदेखि सन् २०१५ मा जस्तै प्रत्यक बाँकी वर्षहरूमा लगातार भित्रिएको रकमले कुन आर्थिक क्षेत्रको विकासमा दिगो रूपले योगदान पुर्‍याउन सक्यो भन्ने कुरामा जिज्ञषा हुनु स्वाभाविकै हो ।
विप्रेषणबाट प्राप्त पुँजीको विवेकशील ढंगले परिचालन हुन सकेको छैन । यो रकमको ७९ प्रतिशत भाग उपभोगमा गएको छ । बाँकी २१ प्रतिशतमा पनि ऋण भुक्तानी ७ प्रतिशत र शिक्षामा ४ प्रतिशत गरी ११ प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेषणको भाग ओगटेको छ । करिब २ प्रतिशत मात्र पुँजी निर्माणमा जान्छ ।
यसले के प्रस्ट पार्छ भने देशको उत्पादक मानव संसाधनले विदेशमा बसेर आर्जन गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । तलको तालिकामा सन् २०१०/११ मा विप्रेषणको प्रयोग (प्रतिशत) भएका क्षेत्रहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
आँकडाअनुसार मानव संसाधन विकास र पुँजी निर्माणमा कुल विप्रेषणको ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ऋण असुलीमा ७ प्रतिशत रहनुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ५८ प्रतिशत घरपरिवारले ऋण लिएर घरपरिवारको दैनिक खर्च चलाएको कुरा घामजस्तै छर्लंग छ ।
घरायसी सम्पत्ति र ऋण असुलीमा भएको खर्चको अनुपातलाई समेत उपभोग खर्चमै समावेश गर्दा कुल विप्रेषणको ९१ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । अधिकांश विप्रेषणको अनुपात उपभोगमा खर्चिएको अवस्थाले के देखाउँछ भने नेपालले विगत दुई दशकमा विप्रेषणबाट आर्जन गरेको रकमको प्रयोग उत्पादक क्षेत्र वा पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्न सकिरहेको छैन ।
यसबाट भावी सन्ततिले पनि रोजीरोटीका निमित्त पखेटा हाल्नुपर्ने बाध्यता हुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बर्सेनि ५/७ अर्ब अमेरिकी डलर देशभित्र भित्रिइरहेको छ । यो रकम वर्तमान उत्पादक मानव संसाधनको पसिनाको मूल्य हो । यसलाई सदुपयोग गरी देश विकासमा लगाउन योजनाविद्, नीतिनिर्माता र राजनीतिज्ञले महसुस गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
आम्दानीको उपभोग अनुपात
विकसित र विकासको पथमा हिँडिरहेका विकासशील देशहरूमा आम्दानीको ठूलो भाग देश वा पुँजी निर्माणमा खर्च हुन्छ । अर्थात् वर्तमान आम्दानीको करिब ५०/६० प्रतिशत राज्यले अपनाएका नीति तथा कार्यनीतिका सहजताका कारण देश विकासमा लगानी हुने गर्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने उपभोगमा कुल आम्दानीको करिब ४०/५० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गर्छ ।
नागरिकले आफ्नो देश निर्माणका निमित्त वर्तमान आम्दानीको ठूलो हिस्सा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । सरकारले यसो गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ । जसरी नागरिकले वर्तमान आम्दानीको मुख्य हिस्सा देश विकासमा लगाउन उपभोगमा कटौती गरेर बचत गर्छन्, त्यसै गरेर सरकारले पनि सीमित स्रोत र साधनको परिचालन विवेकशील ढंगले गर्छ ।
अर्थात् वर्तमान सरकारी उपभोगलाई कटौती गरी सीमित स्रोत र साधनको परिचालन उत्पादक र विकास कार्यमा लगाउँछ । तर, नेपालमा अरू देशहरूले गरेको भन्दा फरक ढंगले सीमित स्रोत र साधनको परिचालन गरिन्छ । हामी आफू पनि जान्दैनौं, अरूबाट पनि सिक्दैनौं । नेपालको वर्तमान कुल आम्दानीको ९०/९५ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ ।
यसले के देखाउँछ भने बाँकी ५/१० प्रतिशत आम्दानीको हिसा विकास कार्यमा खर्च हुने गरेको छ । यसले नेपाललाई संसारका मुलुकहरूसँग तुलना गर्न अयोग्य बनाएको छ । नेपालमा न निजी क्षेत्र मौलाउन वा देश विकासमा समाहित हुन सकेको छ, न सरकारी क्षेत्रले विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानी देश विकासका निमित्त परिचालन गर्न सकिरहेको छ ।
यसको परिणाम हो— आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परनिर्भरता । मानिसका दैनिक उपभोगका वस्तुहरू खाद्यान्न, माछामासु, फलफूल आदि जुन नेपालमा उत्पादन हुन सक्छ त्यसको आयात भइरहेको छ । नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्ने विकास–निर्माणका कार्यहरू हुन नसक्दा बेरोजगारी बढिरहेको छ ।
यसैको प्रतिफल हुन सक्छ आजको वैदेशिक रोजगार । अर्थात् नेपालीले रोजगारी पाउन घरबारी, पाटो–सुर्को, वस्तुभाउ बन्धकमा थाती राखी विदेशतिर पखेटा हाल्नुपरिरहेको छ । त्यसैले नेपालभित्र आएको कुल विप्रेषणको ७ प्रतिशत ऋण तिर्नमा प्रयोग भएको छ ।
सन् २०१५ मा नेपाल भित्रिएको कुल विप्रेषणको १० प्रतिशत रकम विकास कार्यमा परिचालन गर्न सकेको भए करिब ५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरेबराबरको नेपालमा पुँजी निर्माण हुन सक्थ्यो । यस्ले नेपालभित्र थोरै भए पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गथ्र्यो । विदेश जाने केही मानिसले नेपालभित्रै काम गर्ने मौका पाउँथे ।
विगत दुई दशकदेखि नेपालमा आएको विप्रेषणको १० प्रतिशतले करिब १ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने रहेछ । यदि यसो गर्न सकेको भए के आज लोडसेडिङ हटाउन भारतसँग थप बिजुली खरिद गर्नुपथ्र्यो ? यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यही रकमले अन्य वैकल्पिक कार्यहरू पनि गर्न सकिने थियो ।
नेपालमा जति रकम वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको छ त्यसको सदुपयोग भावी सन्ततिको रोजीरोटीको सुरक्षा हुने गरी हुन सकेको छैन । कुनै पनि विकसित वा उदीयमान देशहरूको इतिहासले के देखाउँछ भने एक वा दुई पुस्ताले देश निर्माणका लागि त्याग वा दुःख गर्दा भावी सन्ततिले आरामका साथ सुखमय जीवन बिताएको देख्न सकिन्छ ।
तर, नेपालमा मानिसहरूले विदेशमा गएर दुःखकष्ट गरी नेपालमा रकम पठाएका छन् । यो रकम राजनीतिक नैराश्य र अदूरदर्शिताको कारणले सदुपयोग हुन सकेको छैन । यही परिस्थितिले निरन्तरता पाइरहने हो भने आज जन्मिएको बालकले २० वर्षको हुँदा पनि मेरो रोजीरोटी कहाँ हो भनेर कमण्डलु बोक्नेछ । शंका गर्ने ठाउँ छैन ।
अर्थतन्त्र विप्रेषण धराशायी पुँजी अभाव